Ormond ọhụrụ ụlọ nkwari akụ nke Chow Kit malitere na Kuala Lumpur na Ọktọba
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Malaysia » Ormond ọhụrụ ụlọ nkwari akụ nke Chow Kit malitere na Kuala Lumpur na Ọktọba
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Emeghe n'ime obi ochie Kuala Lumpur, The Chow Kit - Ormond Hotel, ga-etu ọnụ ụlọ 113 na ime ụlọ na mpaghara Chow Kit. Mara maka ahịa na-ekwo ekwo na azụmaahịa mpaghara, Chow Kit ga-abụzi ụlọ nke mbụ site na Ormond Hotels.
Site na saịtị abụọ ọzọ ga-emepe na Melbourne na Dublin site na 2022, Ormond Hotels na-echegharị echiche nke okomoko maka onye njem nke oge a. Ormond Hotels kwenyere na ndụ kachasị mma bụ nke ndụ, nkasi obi na nhazi. N'ụwa jupụtara na oke, mmefu anaghịzi akpali agụụ, ya mere Ormond Hotels edeziela ihe na-adịghị mkpa ma na-elekwasị anya n'ihe kacha mkpa. Ihe ohuru ohuru a di mfe, nke oma bu ihe kachasi nma, ichota na onu ahia na enyere ndi ọbịa Ormond aka inweta ihe di nkpa di nma tinyere echiche.
Kit Chow ga-abụ nke mbụ Kuala Lumpur mere, nke a na-eduzi, nke a na-ahụkarị nke nwere nkwalite site na mpaghara nke obodo ahụ ma ama na njirimara na akụkọ ihe mere eme. Ngwa Chow ga-asọpụrụ agbata obi ya, na-enye ndị ọbịa ụlọ ndọta magnetic na nke na-egosipụta ọnọdụ ya site na ịlụ di na nwunye na oge a, na-agwakọta cosmopolitan na-emecha nkasi obi dị mma, na-eme ka ọ dị ka ụlọ karịa ụlọ nkwari akụ. Hotellọ nkwari akụ ahụ bụ ebe nsọ nke ndị njem maka ịgagharị na mmụọ nsọ, na-eweta ume ọhụrụ na ochie Kuala Lumpur. Dabere na nkeji ise site na ahịa Chow Kit a ma ama, The Chow Kit dị n'ime obi kacha mma Kuala Lumpur, nke skyscrapers na ụlọ ọrụ na-emetụbeghị.
E mepụtara ihe owuwu na ime ụlọ nke Chow Kit site na omume a na-eme na Brooklyn, Studio Tack, bụ onye sitere n'ike mmụọ nsọ nke abalị na-ezo na ndò nke ala Chow Kit na Ogwe na 1970s na 1980s. Ngwa Chow bụ Studio Tacks mbụ na Asia.
Gareth Lim, onye isi oche nke Ormond Group, kwuru maka mmeghe nke The Chow Kit, “Ihe Chow Kit bụ mmeghe zuru oke maka akara ọhụụ anyị, Ormond Hotels. Ihe onwunwe ahụ gosipụtara ọhụụ ịhụnanya nke okomoko dị mfe maka onye njem nke narị afọ nke 21. Ngwa Chow ga-egosipụta ọmarịcha atụmatụ na ọrụ ebe ọ na-egosipụta njikọ siri ike na akụkụ a na-elegharakarị nke ochie Kuala Lumpur anya, anyị nwere ntụkwasị obi na ọ ga-abụ mgbakwunye na-atọ ụtọ na ọnọdụ ile ọbịa nke obodo ahụ. ”
Mmeghe nke Chow Kit biara na onu ogugu nke MoMo nke agbata obi ya, nke ohuru ohuru ohuru ohuru sitere na Ormond Group, nke emebere maka onye na-eme ihe bara uru, onye ndu ndu.